Articles tagged 'zimbabwe divine destiny'
ED urged to uphold justice, peace during elections 23 April 2018 HARARE - President Emmerson Mnangagwa has been challenged to maintain peace and justice by averting a repeat of the previous violence in the country's forthcoming 2018 harmonised elections. This comes as the Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights) joined other civil society organisations...
Christian group in voter awareness drive 4 April 2017 HARARE - A religous movement organisation, Zimbabwe Divine Destiny (ZDD), led by Ancelimo Magaya has launched a campaign to raise voter awareness among Christians in Zimbabwe and mobilise them to participate in the 2018 election. Magaya said the looming elections could only be different if peo...
Church urged to condemn violence 2 October 2016 HARARE - Zimbabwe Divine Destiny (ZDD) leader Ancelimo Magaya has urged more churches to rise and speak against violence, torture and police brutality which they allege is being perpetrated by the President Robert Mugabe-led government. Speaking at a prayer meeting held at the Dutch Reformed C...
Churches push for Mugabe impeachment 1 October 2016 HARARE - Church leaders say they will petition Parliament to impeach President Robert Mugabe after the 92-year-old leader ignored their September 28 ultimatum to initiate dialogue and address issues that triggered the escalating civil unrest. The clergymen — Ancelimo Magaya, Kudakwashe Makuwe,...
'Prepare, we are about to cross over' 26 September 2016 HARARE - Outspoken leader of the Zimbabwe Divine Destiny, Ancelimo Magaya, who has had run-ins with the police in his quest for seeing a better Zimbabwe — says the country is on the cusp of changing its politico leadership. Here he speaks with Senior Assistant Editor Guthrie Munyuki and below ...
More churches push for Mugabe departure 29 June 2016 HARARE - More churches are joining the call for President Robert Mugabe to relinquish power forthwith in the wake of the country's ever-deteriorating economic situation. And in a major departure from the mild positions that faith-based organisations usually take with regard to politics, church...
Police interrogate Magaya 4 January 2016 HARARE - Paranoid Zimbabwean authorities interrogated outspoken preacher Ancelimo Magaya on why he was planning a convergence of political parties, churches and civil society, the Daily News on Sunday has learnt. The bishop, who is the director of Zimbabwe Divine Destiny (ZDD), an organisation...